NoFap ဆေးဝါးသည် ED & SSRI များ - သင်၏ Brain On Porn နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းကိုဖြေသည်
SSRI စိတ်မကျဆေး Antidepressants
SSRI ၏ထိရောက်မှုနှောင့်နှေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီနှစ်ခုရှိသည်။ ဤဆေးများသည် SERT Transporter ကိုပုံမှန်အားဖြင့် synapson မှထုတ်ယူပြီးပြန်လည်အသုံးချရန်အတွက်အမှုန်များထဲသို့ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် pre-synaptic neuron သို့ပြန်လည်စီးဆင်းစေသည်။
ရှေးဟောင်းအတွေးကျောင်းက synapson ၏တည်ငြိမ်သောအဆင့်ကိုရရှိရန်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကြောင့်၎င်းသည်မမှန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကုထုံး၏ serotonin ပမာဏသည်သင် SSRI ၏မည်သည့်တစ်ခုအပေါ်တွင်မှီခိုနေသည်ကို မူတည်၍ နာရီများအတွင်းရက်များအတွင်းတွင်ရရှိသည်။ Fluoxetine ဥပမာအားဖြင့်သက်တမ်းဝက် (half-life) ကိုကြာရှည်စွာဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူနာ၏သွေးထဲတွင်ပုံမှန်ဆေးပမာဏကိုသောက်သုံးပြီးနောက်ရက်ပေါင်းများစွာအထိပင်မအောင်မြင်နိုင်ပါ။
အသစ်သောအတွေးကျောင်းကစိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအမှန်တကယ်တွင် synapson ၌အဆက်မပြတ် serotonin ၏ "downstream" သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသက်ရောက်မှုများသည် serotonin မှစတင်သည်၊ သို့သော် DNA နှင့် RNA (သို့မဟုတ် micro-RNA) မှပရိုတိန်းကူးယူခြင်းအားဖြင့်ကမကထပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Serotonin ကြောင့်လည်းအကျိုးသက်ရောက်သော G-protein နှင့်ဆက်စပ်သော receptors များသည် cyclic AMP ၏ဆယ်လူလာအဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဒီ "မြစ်အောက်ပိုင်း" သီအိုရီမှန်လျှင်, ပရိုတိန်းဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးအချိန်ယူနှင့်နှောင့်နှေးမှု၏အဘို့မှတ်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် serotonin receptor ကိုတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်သော (Buspirone) ဆေးသည် Buspar (ဆေးသည်ဘာမျှမစုဆောင်းထားခြင်း) သည်အလုပ်လုပ်ရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာသည်ကိုသတိပြုပါ။ ၎င်းသည် protien-mediation သီအိုရီကိုထပ်မံထောက်ခံသည်။
ထို့အပြင်က SERT (မကြာခဏစိတ်ဓာတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် Higher-ထက်သာမန်ပမာဏတည်ရှိသည့်) (reuptake) transpoters အမှန်တကယ်တစ်ခု SSRI ၏ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအရေအတွက်ကိုလျော့ချဖို့စတင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ် serotonin ၏ Synaptic အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကာ SSRI ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးပွားရန်စဉ်းစားနေသည် (Zhao နှင့် et al ။ , 2009) ။
တစ်ဦးကစုံတွဲလေ့လာမှုများလည်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုပုံ DNA ကိုကမကထပြုခဲ့ရမည်ဖြစ်သည့်ထို hypocampus ၏ dendrate နျူကလိယနှင့် subventricular ဇုန်အတွက် progenitor ဆဲလ်ကနေ neuron အသစ်တွေ၏ SSRIs အကြောင်းမရှိမျိုးဆက်ပြသခဲ့ကြသည်။ (Santarelli, et ။ အယ်လ် 2003, Manganas et al ။ , 2007 ။ ) အဲဒီအပိုဆောင်းအာရုံခံစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအပေါ်အချို့သော placating အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
SSRI ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုယန္တရားအကြောင်းလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လိင်အပေါ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကောင်းကောင်းထူထောင်ထားပါသည်။
SSRI ဆေးများသည် ED၊ နောက်ကျသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု၊ အမျိုးသားများ၊ နှိုးဆွမှု၊ အမျိုးသမီးများအတွက်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် anorgasmia ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုများကို parasympathetic (သို့) စာနာအာရုံကြောစနစ်များအသီးသီးအပေါ်သက်ရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ PNS နှင့် SNS နှစ်ခုစလုံးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းကိုမှတ်မိရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာ P သည်အမှတ်အတွက်ဖြစ်သည်၊ S သည်ရိုက်ကူးရန်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် SSRI များသည်စနစ်နှစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။
SSRIs အားလုံး anticholinergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှပုံသဏ္ဍာန်အလားတူဖြစ်ကြပြီးအားလုံးအချို့ anticholinergic သက်ရောက်မှု (ခြောက်သွေ့သောမျက်စိ, ပါးစပ်, ဆီးဝန်လေး, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ရှိသည်။ သူတို့ကအစအပျြောအပါးနှင့်အ arousal ချို့ယွင်းရာ dopamine ဂီယာအတွက် reflex လျှော့ချရေး, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ SSRIs စိုက်ထူဖြစ်စေသောအဓိက vasodilator ဖြစ်သော Nitric oxide ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စိုက်ထူတားစီးကြောင်းကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှန်ကန်စွာအမျိုးသမီးလူနာအချို့ကို 40% သတိရခဲ့လျှင်နှင့် SSRIs အပေါ်အထီးလူနာ% 70 မှတက်။ တချို့ကရှေးရှေး (အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်) Viagra ကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကယ်ဆယ်ရေးရနိုင်သည်။ သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့နေကြရသည်သောလူဦးရေအတွက်မှန်လျှင်သို့သော်များသောအားဖြင့်, အရှိဆုံးအထောကျအကူအရာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဆေးဝါးကြိုးစားပါသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ထိုးလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထိုး-မှီခိုဖြစ်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့် SSRI ဆေးများကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု / antianxiety ဆေးဝါးများက Wellbutrin (bupropion) နှင့် Remeron (mirtazapine) တို့ဖြစ်သည်။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးကနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါလုံးဝဆေးမသောက်ခင်ငါနှစ်မျိုးလုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး (CBT) သည်အမြဲတမ်းကဲ့သို့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးဆေးဝါးနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။
တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်. မှာတော့စိတ်ကိုထား (တစ်နေရာရာမှာ 15-18% န်းကျင်ဖြစ်သော) ကကနဦးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုသင် 30 ရက်သတ္တပတ်ချင့်တွက်ရသောအခါ% သို့မဟုတ်ဒါ4နှင့်ဖြစ်စေတုံ့ပြန်မှုလုံလောက်မှုမရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆေးထိုးသို့မဟုတ် switch ကို meds တိုးမြှင့်ဖို့ခုန်စေသည်။ CBT နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူပေါင်းလိုက်သော, ဆေးဝါးကုထုံးမှချိန်ညှိဘို့အတွက်လုံလောက်သောအချိန်ပေးသမျှသောလူနာအကြောင်းကို2/3အတွက်လွှတ်အကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ငါ၏အလယ်ပြင်တွင်,2/3တုံ့ပြန်မှုတော်တော်လေးသူကပြောတယ်ကောင်းလှ၏။
အကယ်၍ သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက၊ မေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ဒါကကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။